कलियुगका कुरा: यस्ताबाट शासित हुँदा नि बहुलाइएको छैन
भाग्यमा विश्वास त गर्न नहुने तै पनि के गर्नु भाग्य नभाभए ? धन्न भाग्य दह्रो रछ र यस्ताबाट शासित हुँदा नि बहुलाइएको छैन...
Netra Niroula, Dipakprasad Bhattarai, Ishwor Shrestha and 140 others like this.
Sunita Giri very good we have not become really mad...
Pawan Acharya हा हा हा हाँस्नुपर्ने कारण धेरै छन्
Raj Yadav ·
No 1 ma PM hunu parne haina ra bhanay ? ·
Raman Dhakal मन्त्रिहरु को साहसीक काम को राम्रो फेहरिस्त हा हा हा हा हा हा·
Manoj Baral puraano Bihari saili nai bhayo ni.
Laxman Puri hehehehehehehehe sati le sarapeko desh ma yastai dekhna ra sunna pain6...k garnu.....
Santosh Chaulagain ho ho dajju ,dr ka mantri asta chan,k hola desh bikash,dr sab panggu hunae bhayae madhav ra jhalanath bhanda panni
Keshav Upadhyaya SARADE ko baa le garikhau bhane ra deiya ko Jilla jasto garchha baa!!
Rc Lamichhane नुनमा नै िमसावट भएपिछ २ नम्बरले नुनकाे साेभफाे गरन पर्रयाे हाेला । २२ िजल्ला भनेकाे कुनै सनकीकाे िवरता हैन, ।
Bishnu Prasai हो हौ दीपक जि अहिले सम्म हाम्रो दिमाग खुस्केको छैन। अब त बानी पनि परी सक्यो नम्बर २६ सम्मका मन्त्रिको कुक्रित्य सुन्दा पनि अब त खुस्कदैन होला जस्तो छ। उदयपुर मार्का सिमेन्ट्ले ढलान भये जस्तो छ।
उत्तम प्रसाट तिवारी Aa·
Mahesh Chhetri ·
दाई त्यो भण्डारीको देशको नाम चाँही के राख्ने रे अनी त्यसको टाउको चाँही कहाँ लुकाउने रे ? हा हा हा हा काँग्रेस, कम्युनिष्ट अनी आफुलाई देशभक्त राष्ट्रवादी भनाउने रा.प्र.पा र अरु भुरे टाकुरे दलहरु कता मरेछन नि यस्ले यस्तो देशद्रोही कुशव्द वमन गर्दा?? यो त गोमन साँप भन्दा पनि खतरनाक रहेछ!!
Dinesh Acharya धन्न भाग्य दह्रो रछ ...यस्ताबाट शासित हुँदा नि बहुलाइएको छैन...!!
विष्णु प्याकुरेल हो दिपक सर, साँच्चै अब मानसिक अस्पताल तीर जति सक्दो चाँडो लेजानु पर्यो यीनलाइ । नत्र के के मात्रै बक्ने हुन् । यी त नेताका नाममा पागल पो रहेछन् ।
Bachchu Rai दिनेश जी हामी सध्ये नै छौं र ?
Jamuna Thapa tyo din naaula bhanna sakinna. yestai taal chaliraho bhane
Tej Prasad Neupane Tosil deepak jee sabai laai tyahi ho............
Ballav Timalsina hahahahaha............... our leaders like businessmen ......... hahahahaha
Khagendra Lamichhane सर जी कुनै दिन मैले हतियार उठाएँ भने अचम्म नमान्नु होला है
Suman Raj Pant bichitra6hou yo desh. dhanya ho pprabhu
Rajendra Aryal hahahhaa
Shambhu Dulal Bichitra vo ......................
Nirajan Nirakar jutta le bhandri lai mala lagaunu ...........sala neta
Puru Nepal khik khik khik khik khik khik bado satya kuro garnu bho ra yatharthapurna , thanks
Amrit Nhehang Rai दण्डहिनता भएको यो मुलुकमा जसले जे भने पनि हुने भो। यति बेला मलाइ भारातका भुपू प्रधान मन्त्रि जवाहार्लाल नेहरुको याद आउ
Amrit Nhehang Rai भारात स्वतन्त्र पश्चात धेरैले भारात टुक्राउन खोजे र आन्दोलन गरे रे। त्यतिनै बेला नेहरुले भनेरे झण्डा जलाउने कुनै पनि मानिस भारातको हुन सक्दैनन् भनेर बिखण्डनकारिहरुलाइ तह लगाएका थिएरे।
Prakash Luitel hahahahahahahahaha....Super Likes :)
Bimal Gautam hahaha..yo desh ma cha
Adhikari Hari super status
Niraj Dahal ·
Narayan Prasad Bhattarai nepal ma mantriko name linu nai bekar6hai
Himalaya Tiwari ·
Tesai hoina parchanda india gayako
Om Suvedi dipak sir aba ti din aaunchhan ki danak dinu parne din aaunchhan training chahi sabai nepali le linu parla jsto chha.·
Dolraj Paudyal ·
Bhot tyatai patti khasne bhaye pachhi ke garne?